Saka ichokwadi! uye mazuva maviri chete kumashure akagashirwa kubva kuGoogle maererano nekukosha kwemapeji ekumhara. Saka kana mumwe munhu achimhanyisa off-peji rekugadzirisa mushandirapamwe, Zvakakosha kuve nerondedzero chaiyo yemazwi akakosha uye peji chairo uko iwo mazwi akakosha achatiendesa ..
Ndira 31, 2012 na12: 56 PM
Kutenda nekugovana hunyanzvi hwako. Ini wechipiri pfungwa yako pane yekunyorera tsamba chinhu! Zvinondishamisa kuti ndinofanira kuchera sei kuti ndinyore kunyorera kumakambani andiri kuda kunzwa kubva.
Ndira 31, 2012 na5: 18 PM
Ini ndinobvuma kuti chimwe chezvinhu zvikuru zvisipo kubva pane ino mifananidzo yemagariro. Ini ndinotenda panofanira kuve nemaviri seti enhau enhau pane yega peji-imwe yekambani, chigadzirwa kana webhusaiti yakazara uye imwe yeiyo chaiyo peji kana chinyorwa icho mushandisi ari kushanyira.